Helitaanka Bilaashka Dhulgariirka ee Samsun! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir55 SamsunHelitaanka Bilaashka Dhulgariirka ee Samsun!
27 / 01 / 2020 55 Samsun, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Gaadiid bilaash ah oo dhulka looga soo qaado aagga dhulgariirku
Helitaanka Bilaashka ah ee Aag Dhul gariirka ee Samsun !; Duqa Magaalada Samsun ee Magaaladda Mustafa Demir ayaa sheegay inay u fidinayaan gaadiid bilaash ah ardayda haysata qoysaskii ku noolaa aafada.
Duqa Magaalada Mustafa Mustafa Demir ayaa shaaca ka qaaday inay ka caawin doonaan ardayda wax ka barata Samsun goobta gaadiidka inay u aadaan qoysaskooda Elazig iyo Malatya. Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay bixin doonaan nooc kasta oo taageero ah haddii ay la soo xiriiraan lambarka 0555 865 55 ee bayaanka uu ka soo dhigay akoonkiisa warbaahinta bulshada, Duqa Demir wuxuu yidhi, "Waxaan si wada jir ah u bogsiin doonnaa dhaawaca."
WAXAAN U AKHRISAYNAA TAAGEERADA MADAXWEYNE
Hadalkiisii ​​uu ka sheegay warbaahinta bulshada, ayuu Madaxweyne Demir yidhi, “Ardaydayada doonaya inay wax ka bartaan Samsun oo u tagta qoysaskooda ku sugan gobolka dhulgariirka ayaa naga soo gaari kara 0555 865 55 10. Waxaan diyaar u nahay inaan taageerno dhammaan noocyada kaladuwan eeyadayada yar yar.
Gaadiidka gawaarida ee Uludag
Gaaritaanka meheradda hudheelka ayaa ah mid dhab ah
Halkan waa biilka ka baxaya aagga hudheelka
Khadadka Tareenka oo u socda Karaman Goobta Dalxiiska
Shabakada tareenka ee ku yaala Karaman Beerta Dhismaha
Uludağ Khadka Baabuurta Lagu Heli Karo Hudheelka Weyn (Video)
Jawaab celin ah in kor loo qaado wiishka
Adeegga gawaarida telefishanka ayaa bilaabay hoteelka Uludag
Meeqa ayuu ku kacayaa in la helo baabuur telefishan oo leh hudheelo?
Injiilka dagaalyahanada gobolka 8 ee Istanbul
Helitaanka Bilaashka ah ee Aag Dhul gariir